Doorashada kursi ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo ka dhacaysa magaalada Dhuusamareeb. – The Voice of Northeastern Kenya
Doorashada kursi ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo ka dhacaysa magaalada Dhuusamareeb.
waxaa Talaadada Maanta ah lagu wadaa in magaalada Dhuusamareb ee xarunta gobolka Galgaduud ay ka dhaco Doorashada kursi ka mid ah Golaha Shacabka Soomaaliya oo horay u banaanaa.
Kursigaaan lagu tartami doono waxaa baneeyay C/qaadir Gaafow Maxamuud oo xilka xubinimada Baarlamaanka Soomaaliya iska casilay, 19-kii bishii August ee sanadkan.
Magaalada Dhuusamareeb shalay gelinkii dambe waxaa ka degay Taliyihii hore ee NISA C/laahi Gaafow Maxamuud oo doonaya inuu ku soo baxo booska uu baneeyay walaalkiisa C/qaadir Gaafow, una tartamaya kursigaasi banaan.
Doorashaddan ayaa waxaa ku tartami doona Xiireey Muxudiin Cumar iyo General C/laahi Gaafow Maxamuud, waxaana magaalada Dhuusamareeb ku sugan sida laxaqiijiyay dhammaan Ergadii loogu tala galay inay xubinta Kursigaan buuxinaysa doortaan.
Gudoomiyaha Guddiga Madaxa Banaan ee Doorashooyinka Qaranka Soomaaliya Xaliimo Ismaaciil (Xaliimo Yarey) ayaa sheegtay inay shalay bilaabeen hubinta Ergooyinka, islamarkaana doorashada maanta ay ku dhaceyso sidii horayba loogu qorsheeyay.
Doorashadaan ayaa sida uu qorshaha yahay waxaa goob joog ka noqon doona Guddiga Doorashooyinka, Wasiiro ka tirsan Galmudug, Maamulka Gobolka kan Degmada, Ururada Bulshada Rayidka iyo Saxaafadda ka howlgasha gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya
Ammaanka magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa aad loo adkeeyay, waxaana xiran waddooyinka ku dhaw goobta ay doorashadu ka dhaceyso, si looga hortago waxkasta oo amaanka lidi ku ah.
Dowlada Soomaaliya oo ku dadaalaysa soo jiidashada maalgashiga hormarinta. →